PeerCoin စျေး - အွန်လိုင်း PPC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PeerCoin (PPC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PeerCoin (PPC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PeerCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $5 856 412.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PeerCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PeerCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PeerCoinPPC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.977PeerCoinPPC သို့ ယူရိုEUR€0.811PeerCoinPPC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.702PeerCoinPPC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.895PeerCoinPPC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr8.12PeerCoinPPC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.6.03PeerCoinPPC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč20.97PeerCoinPPC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.7PeerCoinPPC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.22PeerCoinPPC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.26PeerCoinPPC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$19.48PeerCoinPPC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$7.58PeerCoinPPC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.44PeerCoinPPC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹73.2PeerCoinPPC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.149.66PeerCoinPPC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.3PeerCoinPPC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.36PeerCoinPPC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿30.61PeerCoinPPC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥6.34PeerCoinPPC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥105.54PeerCoinPPC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1091.7PeerCoinPPC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦372.31PeerCoinPPC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽74.43PeerCoinPPC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴27.35
PeerCoinPPC သို့ BitcoinBTC0.00002 PeerCoinPPC သို့ EthereumETH0.000486 PeerCoinPPC သို့ LitecoinLTC0.00438 PeerCoinPPC သို့ DigitalCashDASH0.00377 PeerCoinPPC သို့ MoneroXMR0.0037 PeerCoinPPC သို့ NxtNXT16.04 PeerCoinPPC သို့ Ethereum ClassicETC0.0507 PeerCoinPPC သို့ DogecoinDOGE16.24 PeerCoinPPC သို့ ZCashZEC0.00564 PeerCoinPPC သို့ BitsharesBTS8.49 PeerCoinPPC သို့ DigiByteDGB12.21 PeerCoinPPC သို့ RippleXRP1.04 PeerCoinPPC သို့ BitcoinDarkBTCD3229770.84
PeerCoinPPC သို့ CraigsCoinCRAIG42701480263.15 PeerCoinPPC သို့ BitstakeXBS0.393 PeerCoinPPC သို့ PayCoinXPY390.63 PeerCoinPPC သို့ ProsperCoinPRC97656250 PeerCoinPPC သို့ YbCoinYBC0.000542 PeerCoinPPC သို့ DarkKushDANK30049189814.81 PeerCoinPPC သို့ GiveCoinGIVE202832031250 PeerCoinPPC သို့ KoboCoinKOBO75.21 PeerCoinPPC သို့ DarkTokenDT0.9 PeerCoinPPC သို့ CETUS CoinCETI13522135416.67